घरमा कुकुर पाल्नुभएको छ ? जान्नुहोस् १० टिप्स - ज्ञानविज्ञान
९. कतै जाँदा कुकुरले पछ्यायो या लिएर जानैपर्ने भयो भने गाडीमा उकाल्दा र ओराल्दा विचार पु¥याउनुपर्छ । गाडीमा हुने प्वाल या अन्य अप्ठ्यारो ठाउँमा कुकुरको पन्जा फसेर दुर्घटना निम्तिन सक्छ । अन्य भुस्याहा कुकुर पनि बाटो आसपासमा हुन सक्ने भएकाले आफ्नो कुकुरको मुखमा मजल लगाइदिनुपर्छ । सडकपेटीमा हिँडाउँदा तोकिएको साइडमा हिँड्नुपर्छ भने कुकुरलाई आफूभन्दा देब्रेपट्टि राखेर डो¥याउनुपर्छ ।
Don't Miss it ब्रोइलर कुखुरामा प्रयोग गरिने एन्टिवायोटिक मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक
Up Next बिहान अबेरसम्म सुत्नेहरुलाई हुन सक्ने खतराहरु